Vatosoa miafina 5 ao Kildare izay tsy ho hitanao ao amin'ny boky mpitari-dalana - IntoKildare
Clane, Kildare, Celbridge, Leixlip, Ireo tia ny tantara, Amin'ny teti-bola, Vatosoa miafina, Mpankafy any ivelany
'Ireo làlana tsy voadinika dia mitarika harena sarobidy tsy hita ...'
Misy fientanam-po amin'ny fahitana traikefa izay mahatsapa fa marina kokoa na tsy hitan'ny mpandeha. Na vatosoa miafina toy ny ala, ala rava manan-tantara ary trano taloha izay manaloka ny lalana voapoka, ny sasany amin'ireo fotoana fitsangatsanganana tsy hay hadinoina sy tsy manam-paharoa dia hita rehefa miala amin'ireo boky torolalana ianao. Eto, Into Kildare dia manambara ireo vatosoa miafina 5 ambony ao amin'ny County.
Miaraka amina tongotra an-tongotra 10km vita sonia, ity dia iray amin'ireo faritra mbola tsy hita izay manana hatsarana voajanahary miavaka ao Co Kildare. Killinthomas Wood manana ala konifera marihitra mifangaro miaraka amin'ny zavamaniry sy karazam-biby maro karazana, ary toerana tsara hitsidihana. Azonao atao ny mandeha tongotra fohy na lavitra kokoa, ny lalana dia hamerina anao hatrany amin'ny toeram-piantsonana.
Eo avaratry ny Village of Prosperous ao amin'ny tanànan'ny Ballynafagh dia misy ny sisa tavela amin'ny fiangonana roa. Ny lehibe kokoa dia ny fiangonana RC taloha tao Ballynafagh natsangana tamin'ny taona 1830 ary notazonina hatramin'ny taonjato faha-20 nefa avy eo nanjary tsy nampiasaina ary nesorina tamin'ny farany tafo tamin'ny 1985. Ny sisa tavela dia ny sisa tavela amin'ny fiangonana tany am-boalohany tany avaratra izay mipetraka eo ambonin'ny dongona eo amin'ny zorony atsimo atsinanana amin'ny fiangonana lehibe kokoa. Samy ao anaty vala misy rindrina mahitsizoro izy roa ireo izay mahagaga fa toy ny nosy any amin'ny tanimbary.
Ilay Kamiao Mahagaga
Mpivaro-bidy mahafinaritra Ourlittlehiker
Ilay Kamiao Mahagaga dia trano miavaka sy miendrika corkscrew eo ivelan'ny tanàna Lexlip. Nanomboka tamin'ny 1743, miaraka amin'ny tohatra ivelany mihodinkodina manodidina azy, ny trano dia inoana fa fivarotana varimbazaha ary nahafaly tokoa ny nahita!
Moore Abbey Woods ao Monasterevin dia ala mifangaro miaraka amin'ny safidin'ny làlana mandeha amin'ny toerana misy ny monasiteran'ny taonjato faha-5 naorin'i St Evin izay hita avy amin'ny fijerena anaty ala. Monasterevein dia manasongadina andiana vatosoa miafina mahatalanjona satria miorina manamorona ny Barrow Blueway izy io ary koa misy fantsom-panafody mahatalanjona amin'izao fotoana izao am-pamokarana ary manantena ny hisokafany ao anatin'ny taona manaraka.
Castle an'i Donadea
Tadiavo ny sisan'ny Castle an'i Donadea ary zaridaina misy rindrina izay naverin'ny natiora. Jereo ny fiangonana sy ny tilikambo namboarin'ny fianakavian'i Aylmer sy ny trano nonina mandra-pahafatin'ny fianakaviana farany maty tamin'ny 1935. Ilay Aylmer Loop 5km lava dia mitondra anao hiampita renirano sy mamaky ala ala midadasika. Jereo ny fiainana an-dranomasina manodidina anao amin'ny fitsangatsanganana manodidina ny farihy ary jereo ny sifotra sy ny vorona ao anaty hazo amin'ny làlan'ny natiora. Aorian'ny dianao, miala sasatra amin'ny fisotro mafana sy sakafo maivana ao amin'ny kafe any amin'ny valan-javaboary ala.
ClaneKildareCelbridgeLeixlipIreo tia ny tantaraAmin'ny teti-bolaVatosoa miafinaMpankafy any ivelany